ZayYarHlaing: August 2010
Full moon day of Wahso
After Our Engagement Dinner.
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာရှိသောစေ့စပ်ပွဲလေးအပြီးမှာ၊
ဝါဆိုလပြည့်နေ့ ဖြစ်တာကြောင့်၊ ရသလောက်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
During Our Engagement Dinner.
ကျွန်တော်တို့ စေ့စပ်ပွဲလေးကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာ၊ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အပြောအဆိုတွေခံပြီးရှုရှုလုပ်ထားတဲ့ပုံကလေးတွေပါ။
( 26.July.10 ) Junior Duck Restaurant အပေါ်မှမြင်ရတဲ့ view လေးတွေပါ။
ဇေယျာတစ်ကောင်ကတော့၊ အရှုးလဲရိုက်၊ သူတောင်းစားလဲရိုက်၊ ခွေးလဲရိုက် ...
တစ်ချိန်လုံးရိုက်နေတာပဲလို့ ယုမီရဲ့ အမေကဆူတာကိုခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ိဗျာ။
On the 26th day of July 2010, in front of the parents of both families, we madeamore serious commitment for our future.We solemnly pledged that we'd take good care of each other no matter what. We believe in love yet love needs to work together with commitment to complete our life. We have no doubt that our love and commitment would work together and bring us miracles for ever.
P.S We both are ready to make the most serious vow in the near future!